कुल मुडमा राजेश हमाल
नेपाल लाइभ मंगलबार, चैत ४, २०७६, २०:१२
काठमाडौं- नायक राजेश हमाल अहिले फुर्सदमा छन्। उनको अभिनय यात्रा ठप्प छ। यो बेलामा उनी फुर्सदमा हुने नै भए। पर्दामा उनको अभिनय हेर्न नपाए पनि सामाजिक सञ्जालमा भने उनको अभिनय यात्रा जारी छ।
यत्रो लामो समय अभिनय गरेर बेफुर्सदी भएका उनमा अभिनयको भोक छ कायमै छ। त्यसैले निर्देशकले नपत्याए पनि सामाजिक सञ्जालले त पत्याइहाल्छ। फुर्सदको समय सदुपयोग पनि हुने अनी अभिनयको भोक हल्का मेटिने पनि। त्यसैले हिजोआज उनी इन्स्टाग्राममा खुब सक्रिय हुन थालेका छन्।
म‌ंगलबार उनले इन्स्टामा डान्स गर्दै गरेको सानाे क्लिप राखेका छन्। श्रीमती मधुलाई डेडिकेट गरिएको भिडियोमा उनी कुल मुडमा देखिएका छन्। तर डान्सको पारा भने उही युगदेखि युगसम्मकै देखिन्छ। कुम हल्लाउनेमात्र।
Aaja Furshad ma... Dedicated to Madhu!
A post shared by Rajesh Hamal (@hamalrajesh) on Mar 17, 2020 at 5:30am PDT